မော်တော်သံလိုက်စညျးဝေးပှဲ - တရုတ် Ningbo Sine
မော်တော်သံလိုက် & ညီလာခံ Linear မော်တော်သံလိုက် - Nd သည်သံလိုက်ထုတ်လုပ်သူ Ningbo Sine သံလိုက်ကုမ္ပဏီ။ linear အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာအနေနဲ့ပွင့်လင်းတစ်ဦးမှတစ်ဦးတံခါးပိတ်သံလိုက်စက်ကွင်းအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်မည်သည့်အလယ်အလတ်ပြောင်းလဲခြင်းယန္တရားမရှိဘဲဖြောင့်အညီရွေ့လျားစက်မှုစွမ်းအင်မှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မဂီယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ main features တွေ: 1. Highly တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထိရောက်သော၎င်း၏လမ်းကြောင်းရှည်နှင့်အနိမ့်ဆူညံသံများနှင့်ချောမွေ့စွာတွန်းအင်အားစုနှင့်အတူမရှိပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။2...
မော်တော်သံလိုက် & ညီလာခံ
Linear မော်တော်သံလိုက် – Neodymium Magnet Manufacturer Ningbo Sine သံလိုက်ကုမ္ပဏီ။
1. Highly တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထိရောက်သော၎င်း၏လမ်းကြောင်းရှည်နှင့်အနိမ့်ဆူညံသံများနှင့်ချောမွေ့စွာတွန်းအင်အားစုနှင့်အတူမရှိပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
2. အုပ်စိုးသောမင်းကိုဆန်ခါ၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုရောက်ရှိဖို့နိုင်သလား။ ဒါဟာမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်ရေတို Accelerator ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။
high-speed ကိုရဟတ် - သံလိုက်ထုတ်လုပ်သူ Ningbo Sine သံလိုက်ကုမ္ပဏီ
သံလိုက်အပြင်ဖောက်သည် '' အထူးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောမော်တာ shell ကိုပရိသတျအဖြစ်အသင်းတော်များအမျိုးမျိုး, မြန်နှုန်းမြင့်ရဟတ်နှင့်တိကျသော stepper မော်တာရဟတ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အမြန်နှုန်း, တိများနှင့်ချေးခုခံလှည့်, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့မြန်နှုန်းမြင့်မော်တော်ရဟတ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူကအတူတူမော်တာရိုးတံနှင့်အတူရောင်းချခဲ့နိုင်ပါတယ်။ သံလိုက်လျှောက်လွှာ၏အတှေ့အကွုံအနှစ်နှင့်အတူကျနော်တို့၏ optimized လျှောက်လွှာအစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ် သံလိုက်ပစ္စည်းများ .
မြန်နှုန်းကန့်သတ် 1. 60000-120000rpm ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
2. Precise အတိုင်းအတာ
3. အမြင့် torque
သံလိုက် (sintered Nd သည်သံလိုက်, ဆေးထိုး ferrite သံလိုက်ပါဝင်ပါသည်ထားတဲ့ High-Speed ကိုရဟတ်အမြဲမော်တာမော်ဒယ်များနှင့်စက်မှု brushless မော်တာမှလျှောက်ထားနေကြတယ်, , ကပ်လျက်တည်ရှိ Nd သည်သံလိုက်သို့မဟုတ်ဆမ္ဘော့သံလိုက်) နှင့်သံဝက်ဝံ။
synchronous & Servo Motors က
စွမ်းအင်ချွေတာ, ရိုးရာမော်တာမှနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းနှင့်ချုံ့ pm တွင်မော်တာ၏အားသာချက်များရှိပါသည်ရိုးရှင်း။ ဤရွေ့ကားအသင်းတော်များကြီးတွေ torque နှင့်အနိမ့်ဆူညံသံရှိသည်။ ကျနော်တို့အသင်းတော်များစေရန်အတူတကွ axles, ဂီယာနဲ့သံလိုက်ရဟတ်စုဝေးနိုင်ပါတယ်။
Nd သည်သံလိုက်စုံတွဲ ထုတ်လုပ်သူ -Ningbo Sine သံလိုက်ကုမ္ပဏီ
ရိုးရာသစ်သားဆက်စရာအားလုံးအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ couplers ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝပွန်းပဲ့နေဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်သူတို့တံဆိပ်ခတ်အခြေအနေမှာအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ယိုစိမ့်အမြဲပြောင်းလဲနေသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သံလိုက်သစ်သားဆက်စရာလမ်းဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုအလွန်ရှညျလြားသောသံလိုက်နားချင်းဆက်မှီနိယာမအပေါ်အခြေခံသည့် Non-အဆက်အသွယ်အလုပ်လုပ်စတိုင်များချမှတ်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီသစ်သားဆက်စရာယိုစိမ့်များ၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးသောအငြိမ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအစားပြောင်းလဲနေသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း, အသုံးပြုပါ။
သံလိုက်နည်းပညာအတွေ့အကြုံအနှစ်နှင့်အတူအမြဲတမ်းသံလိုက်ထုတ်လုပ်သူ Sine သံလိုက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သံလိုက်ထုတ်ကုန်များ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဤအတောအတွင်းလွတ်လပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနအဖွဲ့နှင့်ဒီဇိုင်း၏စွမ်းရည်နှင့်အတူငါတို့သည်သင်တို့ optimized ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းများနှင့် application အစီအစဉ်ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
သံလိုက်နားချင်းဆက်မှီသီအိုရီကိုသုံးပြီး 1. Non-အဆက်အသွယ်သံလိုက်သစ်သားဆက်စရာ
2. တည်ငြိမ်သော, အဘယ်သူမျှမယိုစိမ့်မြင့်မားတဲ့တိကျစွာနှင့်ထိရောက်မှုကိုတံဆိပ်ခတ်
မော်တော်ယာဉ် NdFeB သံလိုက်၏အလွန်အရေးကြီးသော application ကိုဧရိယာဖြစ်ပါသည်, အဲဒါကိုအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ, မော်တာနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအများကြီးမော်တော်ယာဉ်ပေါ့ပါးစမတ်ပိုမိုအဆင်ပြေများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကလုပ်သံလိုက်လိုအပ်ပါတယ်။
ယခင်: ရေစိုခံသံလိုက် Button လေး
နောက်တစ်ခု: AlNiCo သံလိုက်